महिलालाई महिनावारी हुँदा किन विदा दिईनुपर्छ ? |
महिलालाई महिनावारी हुँदा किन विदा दिईनुपर्छ ?
प्रकाशित मिति :2016-12-07 10:57:36
एजेन्सी । अहिले चिनका धेरै जसो प्रान्तमा महिलालाई हरेक महिना महिनावारीको समयमा एक तथा दुई दिन विदा लिन पाउने कानुन बनाईएको छ। प्राइड प्लानिङ नामक संस्थाकी कार्यक्रम व्यवस्थापक छुरान छ्याङ आफू महिनावारी हुँदा सधैँ विदा लिन्छिन् । उनी भन्छिन् ‘यो हरेक महिलाका लागि महत्वपूर्ण र अत्यावश्क विकल्पको विषय हो।’
महिनावारीका बेला आफूलाई निकै नै पिडा हुने उनी बताउँछन् । ‘म हरेक महिना सामाजिक सञ्जालमा महिलाको तस्विर पोस्ट गर्छु जसमा महिलाको पेटको वरीपरी तीरहरूले खोपेको देखाएको हुन्छ, यस तस्विरले सामाजिक सञ्जालमा सधै नै धेरै लाईकहरु पाउँछ किनकि यस तस्विरले महिलाले महिनावारीको समयमा भोग्ने पिडालाई दर्शाउँद छ’ उनले भनिन् ।
महिनावारीहुने दिन अगाडि आफूलाई निकै छटपटी हुने उनले बताइन् । बिबिसीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन् ‘पेटमा निकै पिडादायक ऐठन (Stomach cramp -पेट जकडिने) हुने गर्दछ । महिनावारी भइसकेपछि पनि असह्य पिडा हुन्छ र वान्ता हुने जस्तो हुन्छ। म आफू कल्पना गर्छुकी पेटका आन्द्राहरू बाहिर तानेर कैचिले टुक्रा टुक्रा बनाउँ । पढाई सकेर काम गर्न शुरु गरेदेखि हरेक महिना महिनावारीको समयमा पिडा कम गर्ने औषधि लिने र जसका कारण थकान र निद्रा लाग्ने समस्या हुने गरेको उनी बताउँछिन् । मलाई यो समयमा पिडा कम गर्न तातो पानीका बोतलहरू चाहिन्छन्। यस्तो अवस्थामा म मेरो काममा केन्द्रित हुन सक्दिन र त्यो वेला म महिला हुनुमा घृणा गर्दछुु उनले भनिन् । भाग्यवश मेरो कम्पनि ( प्राईड प्लानिङ, जसले महिला अधिकारका लागि काम गर्दछ र महिला कर्मचारीलाई हरेक महिला एक दिन तलवी विदा दिने गर्दछ त्यसैले कर्मचारीले डाक्टरको नोट देखाउनुपर्ने या तलबबाट पैसा कटाईने तनाव लिनु पर्दैन। जरुरी काम सक्नुपर्ने या कामका कारण बाहिर जानैपर्ने विषेश अवस्था बाहेक म महिनावारीमा आधा दिन वा पुरा दिन विदा लिन्छु। अनि घरमा बस्छु र ‍औषधि लिएर सुत्ने गर्दछु या खाटमै बसेर अलि अलि काम गर्छु।’
केही मानिस सोच्दछन् की यसरी महिलालाई महिनावारी विदा दिँदा व्यापारमा घाटा हुन सक्दछ। जसकारण कम्पनीहरूले महिलालाई रोजगारीमा नियुक्त गर्न निरुत्साहित गर्न सक्दछ। तर छ्याङ भन्छिन् की ‘मेरो संस्थामा महिला कर्मचारीको संख्या बढी छ र मेरो संस्थामा कुनै पनि आर्थिक समस्या आइपरेको छैन् र प्रायजसो हरेक महिलाले हरेक महिना महिनावारी विदा लिईरहेका हुन्छन्।’